नेप्सेमा साढे आठ अंकले वृद्धि, कसको कारोबार कस्तो ? « Naya Page
नेप्सेमा साढे आठ अंकले वृद्धि, कसको कारोबार कस्तो ?
काठमाडौं, ६ कार्तिक । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि साढे आठ अङ्कले वृद्धि भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्सेमा ८.५४ ले वृद्धि भई एक हजार ६०६.२५ मा पुगेको छ । नेप्सेमा लगातार भएको वृद्धिले आज पुनः नयाँ उचाई तय गरेको हो । केही दिन पहिले पनि नेप्से एक हजार ६०० को बिन्दुमा पुगेको थियो । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक १.९१ ले वृद्धि भई ३१८.५६ मा पुगेको छ । कूल १८७ कम्पनीको ६४ लाख ५७ हजार ८३३ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ९९ करोड ४५ लाख ४३ हजार ९१९ मा पुगेको छ ।